Ruushka ayaa u hanjabay Google iyo Apple 'falalka sharci darrada ah ee ka dhanka ah Ruushka'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Ruushka ayaa u hanjabay Google iyo Apple 'falalka sharci darrada ah ee ka dhanka ah Ruushka'
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Entertainment • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Ruushka ayaa u yeeray Google iyo Apple 'falal sharci darro ah oo ka dhan ah Ruushka'
Sanadihii hore, “kuwa ka soo horjeeda shisheeyaha iyo xarumaha ku takhasusay wax-ka-qabashada Ruushka ayaa aad ugu dadaalayay inay adeegsadaan waqtigan [doorashooyinka ka hor] si kor loogu qaado dadka, oo ay u dhabar adaygeen,” oo ay ku jirto iyadoo la adeegsanayo farsamadii kombiyuutarada .
Guddiga Senate -ka Ruushka ayaa doonaya inay kala hadlaan Apple iyo Google waxqabadyada 'sharci -darrada ah'
Ka qaybgalka kulanka ayaa u oggolaan doonta Apple iyo Google inay 'fahmaan nuxurka sheegashooyinka Ruushka,' ayuu yiri Senator Klimov.
Waxaa jira 'tusaalooyin halis ah oo xadgudub ku ah sharciga Ruushka' oo ay sameeyeen shirkadaha waaweyn ee farsamada Mareykanka, ayuu yiri Klimov.
Saraakiisha Google iyo Apple ayaa lagu casuumay inay la kulmaan Guddiga Ku -meelgaarka ah ee Golaha Xiriirka Ruushka ee Ilaalinta Madax -bannaanida Dawladda iyo Ka -hortagga Faragelinta ee Arrimaha Gudaha ee dalka si ay ugala hadlaan 'tusaalooyin halis ah oo ku saabsan ku -xadgudubka sharciga Ruushka ee shirkadaha internetka ee caalamiga ah inta badan ku yaal Mareykanka '.
Senator Andrei Klim v
“Waxaan casuumay wakiillada rasmiga ah ee Google iyo Apple ilaa berri (16ka Sebtember) kulanka guddiga. Dhinaca Ruushka ayaa leh su'aalo badan oo la isweydiinayo. Waxaan filaynaa in 10ka subaxnimo (16ka Sebtember) ay jawaab bixin doonaan, ”ayuu yiri Guddoomiyaha guddiga, Senator Andrei Klimov.
Sida laga soo xigtay Senator Klimov, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka, Guddiga Doorashada Dhexe, Xafiiska Xeer -ilaaliyaha Guud iyo RussiaAdeegga Federaalka ee Kormeerka ee Isgaadhsiinta, Teknoloojiyada Macluumaadka, iyo Isgaadhsiinta Dadweynaha ayaa sidoo kale lagu casuumay kulanka.
Klimov wuxuu yiri sidii sanadihii hore, “shisheeyaha ka soo horjeeda iyo xarumaha ku takhasusay howlaha ka soo horjeedda Ruushka ayaa si aad ah isugu dayayay inay adeegsadaan waqtigan [doorashooyinka ka hor] si ay kor ugu qaadaan dadka, oo ay u dhabar adaygeen,” oo ay ku jirto adeegsiga teknolojiyaddii ugu dambaysay ee kombiyuutarka.
“Arrintan, waxaa jira tusaalooyin dhab ah oo ku saabsan xadgudubyada RussiaSharciga shirkadaha internetka ee caalamiga ah oo inta badan ku yaal Maraykanka, ”ayuu yiri madaxa komishanku.
Sida laga soo xigtay Klimov, ka qaybgalka Google iyo Apple ee kulanka guddiga ayaa u oggolaan doonta inay "fahmaan nuxurka sheegashada Ruushka." Kulan kale oo guddiga, ayuu senatorku sheegay, inuu dhacayo kadib doorashada baarlamaanka ee dalka, 21 -ka September.